Slider amin'ny fanaraha-maso ny thermo
Saron'ny sofina azo esorina
Famafana azo esorina,
Famafana fampiononana sy fonosana sofina.
Endri-javatra feno mololo
Karazana vokatra Sarom-panala
Laharana maodely V04
TECHNOLOGY Slider amin'ny fanaraha-maso ny thermo
Fanamarinana CE EN1077
endri-javatra Slider amin'ny fanaraha-maso ny thermo
Manitatra safidy Kitapo manify
andilany Polyester webbing manify
Ny fiarovan-doha fiarovan-doha tsy misy fangarony dia mametaka fiarovan-doha miaraka amina ski. Ny ampinga azo ovaina dia manome fiarovana amin'ny fahazavana UV manimba eo am-panolorana sy ny fomba fijery mivelatra sy mazava mazava mazava tsara. Ny ampinga dia famonoana vita amin'ny rindrina mafy sy fitsaboana anti-zavona. Raha tsy misy ny masomaso manelingelina ary tsy manamboatra tarehy, dia aza misalasala miala sasatra rehefa manao ski.
Fananganana bobongolo miaraka amin'ny slider vent aloha, manome fifehezana thermo ary manome onjam-peo optimum. Ny fanamboarana ny sofina vita amin'ny sofina dia mamindra sy azo esorina ny pad sofina. Rafitra mety azo ovaina, ataovy fonosy tsara sy arovy ny lohanao. Mitandrema, miambena, mafana, mifalia, mankafy!
Ny fenitra ekena manerantany CE EN1077 ekena, fiarovan-doha ho an'ny mpanao ski Alpine ary ho an'ireo mpanao snowboard.
Teo aloha: Snow Helmet V06
Manaraka: Skizy fialan-tsasatra Ski sy snowboard V10ski
Volom-borona Snowboard mora vidy
Helmona Snowboard manokana
Ny fiarovan-doha Snowboard azo antoka
Fiarovan-doha Ski & Snowboard
Skizy fialan-tsasatra Ski sy snowboard V10ski